“Muddo konton sanadood ah kooxda nala xafiiltamaysay waxay ahayd Milan, ma ahayn Barcelona ama cid kale. ” – Florentino Perez oo soo dhoweeyay soo noqoshada Milan – Gool FM
“Muddo konton sanadood ah kooxda nala xafiiltamaysay waxay ahayd Milan, ma ahayn Barcelona ama cid kale. ” – Florentino Perez oo soo dhoweeyay soo noqoshada Milan
Raage July 19, 2017
Real Madrid president Florentino Perez Rodriguez arrives at the team's hotel in Cardiff, south Wales, on June 2, 2017 ahead of the UEFA Champions League final football match between Juventus and Real Madrid in Cardiff on June 3. / AFP PHOTO / JAVIER SORIANO (Photo credit should read JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)
(Madrid) 20 Luulyo 2017 – Kooxda AC Milan oo sanadihii yaraa ee ugu dambeeyay aad hoos uga dhacday makaanaddii iyo maqaamkii ay ku lahaan jirtey qaaradda Yurub ayaa haatan u muuqata mid ugu dambayn hurdada kasoo toosaysa iyadoo ay shaqo wanaagsan qabteen lababada nin ee Fassone-Mirabelli.
Kooxda Rossoneri oo ilaa haatan kharaj garaysay adduun lacageed oo ka badan 200 oo milyan ayaa soo jiidatey indhaha qaar ka mid kooxihii ay la xafiiltami jirtey ee ay lkn beryihii dambe ka lug dambeedinaysay sida Real Madrid.
Florentino Perez, oo ah madaxwaynaha Real Madrid, ayaa isagoo u warramaya Radio Marca, wuxuu soo dhoweeyay soo noolaanshaha kooxda Via Aldo Rossi isagoo leh: “Milan way soo toosaysaa. Muddo konton sanadood ah kooxda nala xafiiltamaysay waxay ahayd Milan, ma ahayn Barcelona ama cid kale. “
Kooxaha Real iyo Rossoneri ayaa waxaa muddo dheer ka dhexeeyay xafiiltan caafimaad qaba iyagoo marka xafiiltanka laga soo tago misna lahaa xiriir saaxiibtinimo oo diirran.
Real Madrid president Florentino Perez Rodriguez arrives at the team’s hotel in Cardiff, south Wales, on June 2, 2017 ahead of the UEFA Champions League final football match between Juventus and Real Madrid in Cardiff on June 3.
/ AFP PHOTO / JAVIER SORIANO (Photo credit should read JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)
SAWIRRO: Barcelona oo ka degatay New York....+SAWIRRO
WAR CUSUB: Xiddiga ay sida wayn u doonayaan Barcelona ee Marco Verratti oo iska ceyriyay wakiilkiisa